Aluminium warshad isku dhafan, Shirkado - Shiinaha Soosaarayaasha isku-dhafan ee Aluminium
Guddi isku dhafan oo aluminium ah oo dahaarka leh
Aluminiumka isku-dhafan ee aluminium (ACP), oo ka samaysan walxaha isku-dhafan ee aluminium (ACM), waa xayndaabyo fidsan oo ka kooban laba lakab oo khafiif ah oo aluminium isku duuban oo isku duuban oo ku xidhan udub aan aluminium ahayn. ACP-yada waxaa badanaa loo isticmaalaa duubista bannaanka ama wejiga dhismooyinka, dahaadhka, iyo calaamadaha. ACP waxaa badanaa loo adeegsadaa isku dhejinta dhismaha ama dibedda gudaha, saqafyada beenta ah, calaamadaha, mashiinnada daboolaya, dhismaha weelka, iwm.
Aluminiumka isku-dhafan ee aluminium wuxuu ka kooban yahay 3 lakab, dusha iyo gadaasha daboolka ah ee xaashida aluminium ee xoogga sare leh iyo xajmiga xaashida polyetylenka cufnaanta hooseysa ee aan sunta lahayn. Feature -Light light, xoog sare, qalafsanaan xad dhaaf ah, caabbinta saamaynta ka sareyso, -waxaa u roonaanta dusha sare iyo jilicsanaanta, kuleylka kuleylka, ningaxa dhawaaqa, dabka iska caabinta, -acid-caabbinta, alkali-caabbinta, ka hortagga cimilada wanaagsan iyo iscelin la'aanta - kaladuwan midabada lebiska, si fudud ayaa loo farsameyn karaa oo loog ...
3mm Alubond Aluminium guddi isku dhafan
ALUMINUM COMPOSITE PANELS Aluminium Isku-darka aluminiumku wuxuu ka kooban yahay laba aluminium oo aluminium ah ama "hargaha" oo ay ku jiraan udub-dhexaad u ah polyetylen, isku xidha ama "sandwiched" inta u dhexeysa labada go'yaal ee aluminium. Tani waxay bixisaa guddi khafiif ah oo haddana adag oo awood u leh adkeysiga waxyaabaha banaanka yaal. Meelaha aluminiumku waa rinji ama anodized. Dusha rinjiga ah ee xaashida aluminiumka waxaa lagu daboolay waxqabadka sare ee polyester-ka waxaana lagu ilaaliyaa diirka wajiga si loo ilaaliyo ...
Culus Waajibaadka Isku-dhafka Ringlock, Qaybta 'Ringlock Scaffolding Bracket', Qaybo ka mid ah Isgoysyada Ringlock, Iskuxidhka Birta Cuplock, Kwikstage Qalabka Isboortiga, Iskeelka Iskeelka Isku-dhejiska ah ee Jack,